Kaalinta ciyaaraha iyo is dhexgalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabriel Wikström, wasiirka ciyaaraha Sweden. Sawirle: Jonas Ekströmer/TT
Kaalinta ciyaaraha iyo is dhexgalka
La daabacay fredag 11 mars 2016 kl 11.23
Ciyaaraha ayaa kaalin ballaaran ku leh is-dhex-galka bulshada.
Iyadoona ay dawladda Sweden dhowaan miisaaniyad dheeri ah u qoondeeysay sannadka sidii loo dardar-gelin lahaa ka mid ahaanshaha bulshada ee ajaaniibta dalka ku cusub. Hanna Henriksen, waa isku duwaha is-dhex-galka ee ururka ciyaaraha Stockholm:
- Illaa iyo hadda waxaa jira 22 urur oo dhaqaale ku heley sidii howlahaa loo dardar-gelin lahaa. Horraantii sannadka ayaa iminka lagu jiraa, waxaanan sidoo kale hubaa iney howlo badan oo qiime ku fadhiya ka socdaan ururrada. Iyadoona ey sidoo kale ururro badani ku talo jiraan sidii ey qeyb uga noqon lahaayeen, sida ay sheegtay.
Sannadkii hore ayay ahayd kolkii ugu horreeysay ee ururrada ciyaaraha loo qoondeeyo miisaaniyad sidii ajaaniibta dalka ku cusub qeyb uga noqon lahaayeen ururrada ciyaaraha. Iyadoona ay dawladdu sannadkaa u qoondeeysay 52 malyan, halka sannadka kor loo qaaday oo la gaarsiiyay 64 malyan oo koron.
Ururrada ciyaaraha ayaa kaalin ballaaran ka qaata nidaamka is-dhex-galka ee bulshooyinka dalka ku cusub, sida uu sheegay wasiirka ciyaaraha Gabriel Wikström:
- Sannadkii hore ayey noo muuqatay kaalinta ciyaaruhu ka qaataan is-dhex-galka, iyadoona ey dalka soo galeen ajaaniib aad u fara badan. Ururrada ayaa u noqdey buundo la isugu dhoweeyo qowmiyadahya kala duwan ee ajaaniibta iyo iswiidhishka. Waana awood loogu baahan yahay nidaamka is-dhex-galka.